Sawiro+Dhageyso Beesha Waceysla Oo Hub Ku Wareejisay Mujaahidiinta Alshabaab. – Calamada.com
Sawiro+Dhageyso Beesha Waceysla Oo Hub Ku Wareejisay Mujaahidiinta Alshabaab.
Kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday mid ka mid ah deegaanada gobalka Galgaduud ee dhaca bartamaha dalka Somali ayaa beesha Waceysla oo ka mid ah beelweynta Abgaal Cusmaan islamarkaana qeyb ka ah beelaha dega gobalka Galgaduud waxey beesha wareejisay hub fara badan oo ay ugu tala gashay in lagula dagaalama Kufaarta iyo Murtadiinta.
Hubkan oo ah ku dhawaad 30 qori ayaa beesha Waceysle qeybta degta degmada Ceeldheer ee gobalka Galgaduud waxey ku wareejisay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud.
Waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud Sheekh Xasan Yacquub Cali oo goobta munaasabada ku sugnaay ayaa beesha kala wareegay hubkaasi’isagoona kaga mahadceliyay beesha Waceysla sida ay u sii xoojinayaan kaalinta kaga aadan dagaalka Jihaadka.
Sidoo kale goobta munaasabada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada Ceeldheer’iyagoona wacad ku maray iney sii xoojinayaan booska kaga aadan dagaalka ka dhanka ah Kufaarta Iyo Murtadiinta.
Halkan Ka Dhageyso Kalimada Waaliga WI Galgaduud.
Halkan Ka Dhageyso Odayaasha Iyo Waxgaradka Beesha Waceysle.
Hoos Ka Daawo Sawirada Hubka La Wareejiyay.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 21-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 21-09-1437 Hijri.
1 thought on “Sawiro+Dhageyso Beesha Waceysla Oo Hub Ku Wareejisay Mujaahidiinta Alshabaab.”
Masha alah halagu daysido besha wacesle